Igama likaMaldonado Igama kunye Nemvelaphi - Imbali Yentsapho
I-Maldonado iyisithenxiso esisetyenziselwa ukubonisa umntu ongekhohlakeleyo okanye engazi, ukusuka kwisiSpanishi mal donado esithetha "ukukhathazeka okubi," ukusuka kumbi , okuthetha "kakubi," kunye ne- donado , elithetha "inikwe, inikwe."
Maldonado ngezinye izihlandlo kwakwindawo yokuhlala, ebonisa umntu ovela "eMaldonado," kwidolophana ephondo laseAlbacete, eSpain.
I-Maldonado yiyona nkcazo eqhelekileyo yesiSpanishi .
Igama lomnye ukuchazwa kwegama : DE MALDONADO, MALDANADO, DE MALDANADO, MALEDANADO, DE MALEDANADO, MALDOLADO, MOLDONADO, BALDONADO, MONTANO, VALDONADO, VALDONAO, MALDONAO
Bahlala phi abantu abaneMardonado Igama lomhla?
Ngokutsho kweWorldNames PublicProfiler uninzi lwabantu abanegama le-Maldonado lihlala e-Argentina, lilandelwa ngokugxilwa eSpeyin, e-United States, eFransi naseSwitzerland. I-forebears ibandakanya idata lokusabalalisa igama kwiindawo ezininzi ezongezelelweyo, kwaye ichonga iMaldonado njengeyona nto ixhaphakileyo eMexico, kwaye ixhaphake ePuerto Rico, apho i-23 yesizwe ihlala khona. Uhlobo oluneMaldanado luxhaphake kakhulu eUnited States.
Abantu abaPhezulu abanegama elibizwa ngokuba ngu-MALDONADO
Umfundisi uRafael Maldonado - umqhubi omnye waseVenezuela
U-Abel Maldonado - wezopolitiko waseMelika, u-48 uLieutenant Governor of California
Candido "Candy" Maldonado - owayekade e-American Major League Baseball
UJosé Maldonado - uguquko lwasePuerto Rican
U-Diego Maldonado - umphathi wecala laseSpain uHernando de Soto
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name MALDONADO
I-Maldonado Crest Family - Akusikho Oko Ucingayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto injenge-Maldadoado intsapho okanye isambatho seengalo zegama le-Maldonado. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
I-Family Tree DNA: i-Maldonado Family Project DNA
Le projekthi yokuhlola i-DNA ijolise ekujoliseni ukuba imilaphi yeMaldonado idibaniswe kunye nemvelaphi yobuhlanga yale miqolo.
UMALDONADO Iforum yoLuntu lweGenaalogy Forum
Khangela le bhansela ethandwayo yohlobo lomnxeba wefayile ye-Maldonado ukufumana abanye abangaphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela umbuzo wakho weMaldonado.
I-FamilySearch - UMALDONADO Uzalwane
Ukufikelela kwii-rekhodi ezidumileyo zeembali zeembali kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca ebizwa nge-Maldonado kunye neenguqu zayo kwiwebhusayithi yezahlulo-mhlaba ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu ye-Latter-Day Saints.
I-GeneaNet - i-Maldonado Records
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweengxelo, imithi yentsapho kunye nezinye izibonelelo kubantu abanomnxeba waseMaldonado, ngokuxinwa kwiirekhodi kunye neentsapho ezivela eFransi, eSpeyin nakwamanye amazwe aseYurophu.
I-MALDONADO Igama lomnxeba kunye neeNcwadi zoLondolozo lweentsapho
Olu luhlu lokuthumela ngokukhululekile lwabaphandi begama le-Maldonado kunye nokuhluka kwalo kubandakanya iinkcukacha zokubhaliselwa kunye neengxelo ezigcinwe ngophando lwemiyalezo edlulileyo.
DistantCousin.com - MALDONADO Imbali yoBomi kunye neNtsapho
Hlola ii-database kunye neefalo zodidi lwegama lokugqibela igama elithi Maldonado.
I-Maldonado Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwimithi yentsapho kunye neenkcukacha ezibhalwe kwii-genealogical kunye neembali zeembali zabantu ngabanye abanegama lokugqibela uMaldonado elivela kwiwebhusayithi yeGenesalogy Today.
Iimpawu eziqhelekileyo ze-US kunye neentsingiselo zabo
10 AbaMnyama abaBalulekileyo kwiMbali yaseMelika